by Anuj Bhai May 01, 2020
आजको युग डिजिटल युग हो । युगान्तकारी परिवर्तनले हरेक क्षेत्रलाई प्रविधियुक्त बनाउँदै लगिरहेको सन्दर्भमा डिजिटल प्रडक्टहरुलाई प्रोमोट गरेर पनि पर्याप्त आर्थिक उपार्जन गर्न सकिन्छ ।
डिजिटल प्रडक्ट भनेको के हो ?
डिजिटल प्रविधिबाट प्रयोग गर्न सकिने कुनै पनि वस्तु वा उत्पादनलाई डिजिटल प्रडक्ट भनिन्छ । ति वस्तु वा उत्पादनहरुलाई कुनै पनि विद्युतीय डिभाइसको माध्यमद्वारा ल्यापटप वा मोवाइलबाट चलाउन सकिन्छ अथवा प्रयोग गर्न सकिन्छ । जसमा सुन्न, हेर्न र पढ्न सकिने हुनुको साथै पुनः दोहो¥याएर पनि पयोग गर्न सकिने हुन्छ । उदाहरणको लागि पछिल्लो पुस्ताका युवाहरुले फिजकल बुकहरु भन्दा इ–बुकहरु पढ्ने गरेको पाइन्छ । आपूmसँग भएको ट्याबमा किण्डलको एप्स डाउनलोड गरेर हजारौं इ–बुकहरु किनेर पढ्न सकिने प्रविधिहरु छन् । जसलाई डिजिटल बुक भन्न सक्छौं । एमेजोन लगायतका विभिन्न कम्पनीहरुले बजारमा किण्डल ल्याइसकेका छन् ।
डिजिटल प्रडक्ट कसले प्रडक्ट गर्छन् ?
विभिन्न कम्पनीहरुले आ–आफ्नो डिजिटल प्रडक्ट र सेवाहरु बजारमा ल्याइरहेका हुन्छन् । अहिले लाई माइक्रोसफ्टकै कुरा गरौं । माइक्रोसफ्टले आफ्नो विभिन्न डिजिटलहरु बजारमा बेचिरहेको छ । हामी सबैले खरिद गरेर प्रयोग गरिरहेको माइक्रोसफ्ट अफिस लगायत कम्प्युटरसँग सम्बन्धित उसका प्रडक्टहरु हामीले जानेर वा नजानेर खरिद गरिरहेका छौं । अरु धेरै उसका डिजिटल प्रडक्टहरु छन् तपाईले माइक्रोसफ्टको वेभसाइट खोलेर हेर्नसक्नुहुन्छ । यसैगरि भिडियो इडिटिङ सफ्टवेयर, ग्राफिक डिजाइन सफ्टवेयर, वेभ डिजाइनिङ सफ्टवेयर यी यस्तै प्रडक्टहरुलाई वास्तवमा डिजिटल प्रडक्ट भनिन्छ ।
यसै अन्तर्गतका अनलाईन कार्ष, अनलाइन कोचिङ पनि एक प्रकारको डिजिटल प्रडक्ट हो । यस अन्तर्गतका इ–बुक, सफ्टवेयर, अडियो, भिडियो, एप्लिकेशनस, अनलाइन कोर्षहरु सबै डिजिटल प्रडक्टहरु नै हुन् ।
सन् २००९ सालमा स्थापना भएको युडिमी डटकम जसले अनलाइनको माध्यमबाट विभिन्न कोर्षहरु आज पनि उपलब्ध गराइरहेको छ । आज विश्वका ५० लाख मानिसहरुले उसका कोर्षहरु लिइरहेको पाउँछौं । तपाईं पनि विकिपिडिया खोलेर हेर्नसक्नुहुन्छ । करिब ३ लाख भन्दा बढि विभिन्न विषयको कोर्षहरु युडिमि डटकमले उत्पादन गरिरहेको छ । तपाई क्याटोगोरीमा गएर प्रत्यक्ष देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न सेक्टरहरु जस्तै : बिजनेश, डिजाइन, लेङ्वेज, ब्युटीपार्लर, मार्केटिङ जस्ता विभिन्न कोर्षहरु डेभलप गरिरहेको छ । त्यहि कोर्षहरु तपाईले खरिद गरेर घरमै बसेर उक्त कोर्षहरु पुरा गर्न सक्नुहुन्छ । यहि नै हो डिडिजटल प्रडक्टको फाइदा पनि ।
यस्तै अर्काे चर्चित कम्पनी क्लिकबैंक डटकमको कोर्षहरु पनि हेर्नसक्नु हुन्छ । त्यसको बारेमा बुझ्न सक्नुहुन्छ । लिन सक्नुहुन्छ । चाहनु भएको खण्डमा तपाई क्लिकबैंक डटकमसँग एफिलिएट भएर काम गरेर लगभग ४० देखी ७५ प्रतिशत सम्म कमिशन प्राप्त गर्न पनि सक्नुहुन्छ ।
वितेका दशकदेखी प्रविधिको विकासलाई पछ्याउँदै विभिन्न कम्पनीहरुले डिजिटल प्रडक्टहरु बजारमा लिएर आएकाछन् । विशेषगरि सफ्टवेयर तथा इ–बुकहरु बजारमा ब्याप्त छन् । यी कम्पनीहरुको डिजिटल प्रडक्टहरुलाई विश्वव्यापिकरण गर्नकोलागि एफिलिएट मार्केटिङको अवधारणाको विकास गरेकाछन् । एफिलिएट मार्केटिङ विश्व बजारको पछिल्लो प्रविधिमैत्री मार्केटिङ अवधारणा हो । त्यो भन्दा अघिका जति पनि मार्केटिङका अवधारणाहरु आए । विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न किसिमका पोलिसिहरु बने । जब इन्टरनेटको विकास हुँदै आयो, सहज र सस्तो ढंगबाट मार्केटिङ गर्ने तरिकाहरु परिवर्तन हुँदै आए । त्यसको पछिल्लो विकसित रुप एफिलिएट मार्केटिङ हो । एफिलिएट मार्केटिङ मार्फत विश्वका चर्चित कम्पननीहरुले आफ्नो उत्पादन विक्रि वितरण गरिरहेको छ ।
यहि एफिलिएट मार्केटिङको अवधारणाले कम्पनीका उत्पादन तथा सेवाको व्यापक रुपमा चर्चा परिचर्चा गर्न सफल भइरहेका छन् ।
एफिलिएट मार्केटिङको अवधारणा अनुसार कम्पनीले आफ्नो उत्पादन वा सेवालाई धेरै उपभोत्तक्ताहरुको माझमा प्रचार गरि धेरै परिमाणमा विक्रि वितरण र सेवा उपलब्ध गराउन क्रममा एउटा ग्राहक/उपभोक्ता पनि वितरक (डिस्ट्रिब्युटर) बन्न सक्छ । उदाहरणको लागि, मैले कुनै पनि कम्पनीको उत्पादन खरिद गरेर अरुलाई पनि खरिद गर्न सिफारिस गरेर मैले सिफारिस गरेको व्यक्तिले उक्त उत्पादन खरिद ग¥यो भने कम्पनीले मलाई कम्पनीको नियम अनुसारको सिफारिस गरे वापत कमिसन प्रदान गर्दछ । यहि अवधारणाबाट मार्गनिर्देशित छ एफिलिएट मार्केटिङ ।
आजका इन्टरनेट मार्केटरहरु एउटा ल्यापटप इन्टरनेटको साहाराले घरममै बसेर उनीहरुले प्रयोग गरिरहेका डिजिटल प्रडक्टहरुको फाइदा बेफाइदा, उनीहरुलाई मिलेको सन्तुष्टि, यसले समाजमा ल्याएको सकरात्मक पक्षहरुको बारेमा फेसबुकमा लेख्छन्, ब्लगमा लेख्छन्, भिडियो बनाएर युट्युबमा राख्छन । ति सामाग्रीहरु सामाजिक सञ्जाल मार्फत धेरैको भिवर्सहरुको माझमा पुग्छ । त्यहि भिवर्स मध्येकै कसैले उसको लिंक मार्फत खरिद गरेमा उसलाई कम्पनीले कमिशन प्रदान गर्दछ ।
आज ClickBank, Jvzoo, Easy1up को लगायत कम्पनीहरको अवधारणा उस्तै नै हो । विश्वका विकसित राष्ट्रहरुमा अहिले यहि अवधारणा लागु भइरहेको छ । हाम्रो नेपाल जस्तो विशेषतः दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमा यसको अभ्यास कमै भएको यथार्थ हामी सामु रहेको छ ।
हामीले डिजिटल प्रडक्टको मार्केटिङ गर्दा कुनै निश्चित क्षेत्रमा मात्र नभई विश्वव्यापि गर्न सकिने भएको हुनाले पनि आजका मानिसहरु डिजिटल प्रडक्टको मार्केटिङ पनि डिजिटल नै गर्न अग्रसर रहेको पाउन सकिन्छ । यसमा एउटै कोठमा बसेर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रि क्षेत्रमा मार्केटिङ गर्न सकिन्छ । यो फराकिलो व्यपारको अवधारणा इन्टरनेटले सम्भव बनाएको छ ।
डिजिट प्रडक्टको मार्केटिङ गर्नुको अर्काे गुण भनेको फिजिकल मार्केटिङको तुलनामा अधिक कमिसन हो । हुन त फिजिकल प्रडक्टको महत्व नभएको होइन । यद्यपी फाइदाको हिसाबले हेर्ने हो भने डिजिटल प्रडक्टको मार्केटिङमा जस्तो सजिलो र सरल फिजिकल प्रडक्टमा हुँदैन । आम्दानीको हिसाबले त धेरै नै अन्तर हुन्छ ।
महत्वको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि डिजिटल प्रडक्टहरु फिजिकल प्रडक्टहरुहरु भन्दा धेरै महत्वपूर्ण र असिमित हुन्छन् । आजको संसारमा वेभ डिजाइन वा एउटा एप्लिकेशनको महत्व कति छ ? यो अन्य फिजिकल प्रडक्ट गर्न नै असम्भव छ ।
डिजिटल प्रडक्टको मार्केटिङ गर्दा फाइदा हुने अर्काे पक्ष भनेको तपाई जहाँ बसेर पनि जुनसुकै समयमा पनि गर्न सक्नु नै हो । किन भने यसमा फिजिकल जस्तो कुनै स्टोरको आवश्यकता पर्दैन र बोकेर हिँड्ने झण्झट पनि हुँदैन कुनै कामदारको जरुरी हुँदैन । डिजिटल प्रडक्टहरु इन्टरनेटको सफ्टवेयरमा लगिङ पासवर्ड र युजर नेममा नै सिमित रहेको हुन्छ । त्यसकारण तपाई पार्कमा घुम्दै पनि एउटा मोवाइलको माध्यमबाट पनि तपाई मार्केटिङ गर्न सक्नुहुन्छ । एउटा ट्याबको माध्यमबाट आफ्नो ब्यापार कण्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ ।
फेरी डिजिटल प्रडक्ट फिजिकल प्रडक्ट छिटो विक्रिहुने संभावना जहिले पनि हुन्छ । किन भने यसको डेलिभरि तुरुन्तै हुन्छ । अर्काे फाइदा भनेको काम गर्ने भार पनि कम हुनु हो । यसमा कामदारहरु नहुने भएको हुनाले अरुको तनाव लिन आवश्यक हुँदैन । फिजिकल प्रडक्टमा दश जनाले गर्ने काम डिजिटल प्रडक्टमा एकै जनाले गर्न सकिन्छ । अनि यसको स्टक असिमित हुन्छ ।
फिजिकलमा स्टक सकिन सक्छ तर, डिजिटलमा कहिल्यै स्टक सकिँदैन । अर्काे महत्पूर्ण फाइदा भनेको यसमा तपाईले अटोमेटेड सिस्टमबाट पनि कतिपय कामहरु गर्न सक्नुहुन्छ । तपाईले कुनै पनि डिजिटल मार्केटिङको माध्यमबाट कुनै पनि प्रडक्ट बेच्न चाहनुभयो भने तपाईको बिजनेसलाई अटोपाइलटमा राखेर पनि काम गर्न सक्नु हुन्छ त्यहाँ कति कामहरु सफ्टवेयरले नै तपाईको कामहरु गरिरहेको हुन्छ ।
डिजिटल प्रडक्टको प्रोमोट गर्ने सन्दर्भमा केहि थप जानकारीहरु म दिँदै जाने छु । यो लेखबाट केहि न केहि कुराहरु थाहा गर्नुभयो भन्ने मैले आशा गरेको छु । तपाईको अमूल्य सल्लाह र सुझावको अपेक्षा गर्दछु ।
Start Your Online Business Here : Click Here
धन्यवाद राम्रो कन्टेन्ट र राम्रो शुचनाहरु शेयर गरि पढ्ने वातावरण प्रदान गर्नुभएको मा।
Thank you very much for reading ..Keep reading hai
मैले तपाईंको हरेक लेख , यूट्यूव, facebook live, हरू निरन्तर रुपमा हेर्दै आएको छु। कारण म पनि यो अनलाइन मार्केटिङको बारेमा धेरै पहिलादेखि जान्ने इच्छा हुदाहुदै पनि उचित तरिकाले बुझ्न नसिकिरहेको यो अवस्थामा तपाइको यो प्रयासले म जस्ता थुप्रै युवाहरुलाई सकारात्मक र एउटा उत्साहा भने मिलेको छ। सबै कुराको निम्ति आभार प्रकट गर्न चाहान्छु।